Lee ị nwere chaja ọhụrụ maka Apple Watch si Satechi | Esi m mac
Nke a bụ chaja ọhụrụ maka Apple Watch si Satechi
Satechi na-aga n'ihu na-agbanwe agbanwe ma na nke a, ha ewepụtala chaja maka Apple Watch nwere ọdụ ụgbọ USB yana ọdụ ụgbọ mmiri atọ nke otu ụdị. mpụga nakwa dị ka onye nwere ọgụgụ isi Nchaji usoro.
Ihe ohuru nke chaja a bu na obu ejighi ya maka Apple Watch ma obu na o na - eweta ihe nlekota ka i wee jiri ya na Apple Watch. na Fitbit Blaze na inwe ike ịkwụ ụgwọ ekwentị gị.
Satechi kere ụdị igbe nke edoziri njikọ USB abụọ n'ime akụkụ nke mpụga na nke dị n'ime akụkụ ahụ. Na mpaghara dị na nkwụnye ahụ, anyị nwere ike ijikọ eriri USB nke ngwaọrụ anyị kpebiri ịgbanye, nke anyị gwara gị ọ bụghị nanị na ọ na-abịa njikere maka ya Apple Watch, enwe ike ịdeghachi iPhone gị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịchọta Lightning odori USB na gụnyere nkwụnye ọkụ.
Banyere njirimara ya, dịka ị pụrụ ịhụ, ọ bụ nguzo nke yiri cube na n'akụkụ ya nke elu nwere ohere ịchọta ihe nkwụnye dị iche iche iji nwee ike ijikọ eriri nkwụnye nke anyị na-eji, nke anyị ga-ejikọta n'ime n'ime ozugbo akpọre. elu iji chekwaa ha. Site na nke a ka anyị chọrọ ịgwa gị na Satechi chere maka usoro nke tebụl gị yana enwere ike iji chaja n'ime ebe chaja maka obere ihe dị ka eriri ma ọ bụ kaadị ebe nchekwa.
Banyere ya teknuzu e ji mara, anyị nwere na nke a Nchaji guzoro na-onwem na Smart Nchaji technology. A na-ahazi ike na ngwa ngwa ngwa ngwa nye 5V / 2.4A max na ọdụ ụgbọ mmiri ọ bụla, na-enye ngụkọta nke 6 Amps.
Ọ dị na agba atọ, gold, ọlaọcha na oghere ntụ ma ị nwere ike ịchọta ya na njikọ na-esonụ na ọnụahịa nke Dollar 34,99.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Nke a bụ chaja ọhụrụ maka Apple Watch si Satechi
Ha ga-emerịrị nnukwu atụmatụ a site na itinye tray ahụ dị egwu Korea n'etiti ngwaọrụ ndị ejikọrọ?
Mbupu mbụ nke LG UltraFine 5K
Ihe ọhụrụ MacBook Pros na Touch Bar dịkwa na Amazon